तिथि मेरो पत्रु » अनलाइन डेटिङ सफलता लागि तीन सुझाव
अनलाइन डेटिङ दृश्य नयाँ? खैर, यो विश्वास वा छैन, अनलाइन डेटिङ जस्तै प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ, यदि नहीं तो, परम्परागत डेटिङ भन्दा. तपाईं निरुत्साहित कि नदेऊ, तथापि. धेरै मानिसहरू मिति पाएका, र अक्सर विवाह, अनलाइन डेटिङ सेवा मार्फत. तपाईं प्राप्त तपाईंको प्रतिस्पर्धा भन्दा याद आफ्नो प्रोफाइल सुझाव र मदत गर्न सक्छ कि रणनीति हो. यहाँ तपाईं लाग्न सक्छ तीन रणनीतिक कदम आफ्नो प्रोफाइल नजर दिन सक्छ र महसुस यसलाई तिमीलाई भेट्न प्रेम मान्छे को प्रकारको आकर्षित गर्न आवश्यक.
टिप 1: सही प्रोफाइल फोटो छान्नुहोस्
तपाईंको फोटो आफ्नो प्रोफाइल मानिसहरूलाई आकर्षित गर्नेछ भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक मध्ये एक छ. पहिलो र प्रमुख, तपाईं हाल एक तस्वीर छन् भनेर पक्का. जबकि कलेज वसन्त पछि ब्रेक मा बिकनी मा तपाईं को त्यो चित्र निश्चित 1995 प्यारा हुन सक्छ, तर आफ्नो मिति तपाईं हेर्न तपाईं कलेज मा गरे जस्तै अपेक्षा पूरा गर्दा, आफ्नो मिति निराश हुनेछ. यो mistrust उदास र धोका महसुस गर्न आफ्नो मिति सिर्जना र हुन सक्छ. यो एक सम्बन्ध सुरु गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो कुरा कहिल्यै छ.
साथै, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरू बन्द देखाउने एक फोटो छनोट. बनाउन तपाईं एउटा अनुकूल मुस्कान लगाएका छन् पक्का, यो एउटा गम्भीर पोज भन्दा धेरै मोहक हुनेछ वा, स्पष्ट, एक भ्रूभंग. फोटो जहाँ तपाईं अर्को व्यक्तिसँग सधैं जोगिन, वा, बुरा अझै, तपाईं अन्य व्यक्ति फोटो बाहिर कटी छन्, मात्र एक रहस्यमय हात पछाडि छोड्ने. आफ्नो मिति वास्तवमा तपाईं वा ìmysterious armi जो आश्चर्य छ व्यक्ति द्वारा भ्रमित हुन सक्छ.
टिप 2: आफ्नो चासो प्रकट गर्न तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम प्रयोग
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम बस आफ्नो आफ्नो अनलाइन डेटिङ सेवामा लग इन गर्नुहोस् तरिका लाग्नसक्छ, तर यो मामला isnít. तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम पहिलो कुरा को एक कसैले तपाईंलाई पढ्न र राम्रो प्रयोगकर्ता नाम प्रोफाइल दृश्य र एक प्रोफाइल भिन्नता अर्थ राख्छ पारित अप छ. एउटा साधारण प्रविधी someoneís ध्यान फसाउन ìJenny321î जस्तै परम्परागत अज्ञात प्रयोगकर्ता नाम संग तर किन एउटा प्रमुख मौका मा बाहिर सम्झना वा आफ्नो बारेमा एक बिट प्रकट गर्न छ?
तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम मूल बनाउन र यसलाई आफ्नो व्यक्तित्व अलि केही भन्न बनाउन. छान्नुहोस् 'SweetSinger’ तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम जस्तै आफ्नो शौक गाइरहेका वा ìDodgersDudeî आफ्नो एक उत्सुक Dodgers प्रशंसक कम्पनी को लागि देख यदि छ भने. तपाईंको चतुर प्रयोगकर्ता नाम मात्र आफ्नो व्यक्तित्व वा चासो बारेमा थोडा साझेदारी छैन, तर पनि एउटै चासो मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छन्. तर गलत छाप दिन होसियार हुन. तपाईं रमाइलो गर्न प्रेम मतलब तपाईं प्रयोगकर्ता नाम ìFunLovinî व्याख्या केवल किनभने, आफ्नो प्रोफाइल हेर्नको ìFunLovinî तपाईं मतलब लाग्छ सक्छ व्यक्ति केही मजा loviní लागि देख रहे, मैले के भन्न खोजेको भन्ने तिमीलाई थाहा भए.
टिप 3: यो भन्नुहोस् Donít, प्रमाणित गर्नुहाेस! र विशिष्ट हुनुहोस्
आफ्नो प्रोफाइल विवरण विकास गर्दा, तपाईं यो बस adjectivesÖ को एक नीरस सूची नै विशेषण अन्य प्रोफाइल हजारौं देखाइदै हो ìIím humor.î को राम्रो अर्थमा संग हास्यास्पद र स्मार्ट जस्तै केहि लेख्न परीक्षा हुन सक्छ. तपाईं साँच्चै आफ्नो प्रोफाइल खडा आउट गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं विशेष मार्फत आफूलाई वर्णन गर्न आवश्यक.
बरु तपाईं यसो को “अनौठो” वा छ “हास्य को राम्रो अर्थमा”, आफ्नो प्रोफाइल हास्यास्पद बनाउन. स्वादिष्ट Jokes को एक जोडी दरार वा हास्यास्पद घटना बताउन. यो तपाईं हास्य को अर्थमा कस्तो तपाईंको दर्शक साबित हुनेछ. हास्य को आफ्नो भावना कि दर्शक लागि आकर्षक छ भने, तिनीहरूले तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछ. बरु बस तपाईं ìsmartî छन् कि बताउँदै भन्दा, तपाईंको दर्शक साबित भनेर आफ्नो मनपर्ने पुस्तक वा आफ्नो चासो तपाईं कसरी स्मार्ट सूची. यो पनि आफ्नो दर्शक उसले सिधै सम्बन्धित गर्न सक्षम हुने केही विशिष्ट उदाहरण दिन हुनेछ.
सम्झना, तपाईं एक प्रोफाइल बस किनभने, आवश्यक doesnít मतलब तपाईं तुरुन्त प्रतिक्रियाहरू प्राप्त हुनेछ. यी तीन सुझाव पक्कै मदत गर्नेछ, सम्म तपाईं चाहनुहुन्छ परिणाम प्राप्त सुरु तर आफ्नो प्रोफाइल सामग्रीहरू साथमा प्ले. कुनै एक चासो सूचीमा प्रतिक्रिया छ भने, माथि राखे केही नयाँ. प्रतिक्रिया कस्तो तपाईं प्राप्त हेर्न गर्दा हरेक पटक आफ्नो फोटो स्विच. तपाईं आफ्नो अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल प्रयोग गर्नुहोस् रूपमा, तपाईं आषा के देख गरिएको छ प्रतिक्रियाहरू फेला पार्न सुरु हुनेछ.